संसद् पुनःस्थापना भए आकाश खस्छ ? पृथ्वी भासिन्छ ? - Gandak News
संसद् पुनःस्थापना भए आकाश खस्छ ? पृथ्वी भासिन्छ ?
गण्डक न्यूज द्वारा ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १६:५६ मा प्रकाशित 0
ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले संसद् ‘९९.९ प्रतिशत पुनःस्थापना हुने सम्भावना नभएको’ जिकिर गरेका छन् । मंगलबार राजधानीमा युवा संघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले संसद् विघटन अग्रगामी र प्रगतिशील कदम भएको पनि दाबी गरे ।
मन्त्री रायमाझीले संसद् पुनःस्थापनाको कुरा गरेर जनतामा विश्वास नगर्नु यथास्थितिवादी, प्रतिगामी चिन्तन भएको बताए । ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका रायमाझीले जनताप्रति विश्वास नभएर नेपाली कांग्रेस ढुलमुल भइरहेको आरोप लगाए ।
‘‘यदि, संसद् पुनःस्थापना भए पनि आकाश खस्छ, पृथ्वी भासिन्छ ?,’’ उनले भने ।
मन्त्री रायमाझीले प्रचण्ड–नेपाल नसच्चिए अब प्रधानमन्त्री नै नबन्ने दाबी गरे । संसद् पुनःस्थापना भए पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने जिकिर गरे । आफूहरुले ओलीलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री बनाउने माहोल बनाउने उनको भनाइ थियो ।